ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါ ပိုက်ဆံအချို့
ကျွန်မ ရွှေဘုံသာလမ်းမှ ၀ယ်ယူစုဆောင်းထားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါ ပိုက်ဆံအချို့ပါ။ ဖိုရမ် နှစ်ခုမှာ တင်ပေးဖူးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်က သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ထပ်မံ တင်လိုက်ပါတယ်။
ရေးပြီးချိန်: 7/05/2007 09:01:00 PM
သမီးရေ.. ကောင်းလိုက်တာ..ရှားရှားပါးပါးကို အမှတ်တရ တွေ့ရတာ။ကလေးတွေ ပြဖို့ သိမ်းထားဦးမှ
မဆိုး သေချာစွာ Scan ဖတ်ပြီး တင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ. အိမ်မှာတော့ အဖေ ရန်ကုန်လမ်းဘေးမှာ ရောင်းနေတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်လေးတွေလား . အဲဒီကနေ ငွေစက္ကုအဟောင်း တစ်စုံဝယ်လာဖူးတယ်ဗျ .. ခုတော့ ပါမလာဘူး။ အဲဒီတုန်းက ငွေတွေက ခုငွေတွေထက် တန်ဖိုးပိုများမယ်ထင်တယ်။
ပိုက်ဆံလေးတွေကြည့်ပြီး စိတ်ထဲမှာ တမျိုးကြီးခံစားရပါတယ်။ ပြထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေအကုန်လုံးမကိုင်ဖူးပါဘူး။ ကိုယ်မှီသလောက် ငွေစက္ကူလေးတွေမြင်ရတော့ ငယ်ငယ်က ဘ၀ကိုချက်ချင်းသွားသတိရတယ်။ အာဇာနည်နေ့မှာ ကျောင်းမှာ ကဗျာရွတ်ပွဲတွေ၊ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွေ၊ အလံတ၀က်လွှင့်ထူတာ၊ ဥသြဆွဲတာတွေ ပြန်သတိရမိပါတယ်။ နောင်လာနောက်သားတွေပြဖို့ သိမ်းထားသင့်တဲ့ငွေ စက္ကူတွေပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်မရေ...
တချို့ပိုက်ဆံတွေဆိုရင် မမြင်တောင် မမြင်ဖူးဘူး။ တချို့ကို ငယ်ငယ်တုန်းက သုံးခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာပဲ မှတ်မိတော့တယ်။ ကျေးဇူးပါ s0wha1 ရေ။း)
အားလုံးပဲ သဘောကျကြလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ တင်ရကျိုးနပ်တာပေါ့။း)
Thank You s0wha1 for the all Bogyoke's...!
Ko Myoe 88